ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၏ မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ပြန်ကြားရေးက ရေဆုံးမြေဆုံးထိ ကန့်ကွက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် (ရုပ်သံ)
စာနယ်ဇင်းကောင်စီ၏ မီဒီယာဥပဒေကြမ်း ပြန်ကြားရေးက ရေဆုံးမြေဆုံးထိ ကန့်ကွက်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက် (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 7:13 PM
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင်.က တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ. အရေးကြီးတဲ.
.. အဲဒါလွတ်လပ်ခွင်.မပေးရင် ပြည်သူတွေကို ဒီမိုကရေစီ
မပေးတာ (သို.) တစိတ်တဒေသဘဲ ပေးတဲ.
ဒါဟာ စာနယ်ဇင်း လောက သားတွေနဲ. သာဆိုင်တာမဟုတ်ဘူး ။
ပြည်သူအားလုံး နဲ.ဆိုင်ပါတယ် ။